HomeWararka CiyaarahaWar Xaqiiq Ah: Bruno Fernandes oo ku jira kooxda Manchester United ee ka Hortageysa Liverpool
Bruno Fernandes ayaa lagu soo daray kooxda Manchester United ee maanta la ciyaari doonta Liverpool Premier League kadib markii laga baqay in dhaawac uu xiddiga ree Portugal ka reebi karo tartanka.
Tababaraha Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ayaa qirtay in weeraryahanku uu seegi karo kulanka Reds sababtuna tahay jug ka soo gaartay intii ay Champions League kaga adkaadeen Atalanta BC Arbacadii.
Si kastaba ha ahaatee, Fernandes waxaa lagu sawiray Kooxda Sabtidii timaaday xaruntooda hoteelka Lowry.
27 jirkaan, oo la sheegay inuu wadahadalo kula jiro kooxda oo ku saabsan heshiis cusub oo waqti dheer ah, ayaa dhaliyay afar gool waxaana uu diiwaangeliyay lix caawin 12 kulan oo uu u saftay kooxda 20ka jeer ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan.
Marcus Rashford ayaa sidoo kale lagu sawiray isagoo huteelka imaanaya, iyadoo xiddiga reer England uusan wax dhibaato ah qabin tan iyo markii uu soo laabtay kulankii Leicester City isbuucii hore.
Solskjaer ayaa soo jeediyay in Raphael Varane uusan aad uga fogeyn inuu ku soo laabto garoonka ka dib dhaawac, laakiin xiddiga reer France ayaa u muuqda inuusan ku lug yeelan doonin kulanka Jurgen Klopp .